I-Istanbul Bosphorus Mansion - I-Airbnb
I-Istanbul Bosphorus Mansion
Ikamelo e-i-villa ibungazwe ngu-Ganimet
I-Bosphorus Mansion enokubukwa kwe-panoramic Istanbul Bosphorus. Itholakala kwenye yezindawo ezihlonishwa kakhulu emhlabeni, ukubukwa okuhlaba umxhwele kuyo yonke indawo. Leli khaya lomlando liyanambitheka, liyamukeleka, futhi ligcwele ukukhanya kwemvelo. Leli khaya linokubukwa okuhle kakhulu kwenye yezindawo ezinhle kakhulu zase-Istanbul. Le ndawo enhle yesimanje inakho konke ongakufuna endaweni eyodwa. Ilungele amaholide omndeni, imibuthano enobungane, izindawo zokuphumula zothando...
Le villa eyinkimbinkimbi iklanywe ngesitayela. Indawo inokubukwa okumangalisayo kwe-Istanbul Bosphorus, enezindawo eziningi zokuhlala ukuze uphumule futhi uthathe imibono.
Igumbi lokudlela elisemthethweni lihlala izihambeli ezifika kweziyisishiyagalombili. Igumbi lokuhlala liqukethe indawo kanye nokubukwa kwe-TV okuhlukile, nokubukwa okumangalisayo kwedolobha. Izici zekhishi ezihlome kahle, isiqandisi esikhulu, umshini wekhofi, i-toaster. Ama-suites abanzi anekhabethe langasese lokuhamba ngezinyawo, i-closet eshelelayo kanye nebhavu likanokusho eliphelele elinendawo yokubeka ithawula elishisayo. Isistimu yomsindo yangaphakathi nangaphandle, i-BBQ, umgodi womlilo wegesi eyakhelwe ngaphakathi kanye nombono we-bosphorus omuhle kwenza leli khaya lilungele ukuzijabulisa. Leli khaya eliklanywe ngendlela emangalisayo lidala ukuhlanganiswa kogqozi nomklamo wezakhiwo. Yonke imininingwane yakhethwa ngokucophelela futhi ikhwalithi yaklanywa.
Itholakala imizuzu emi-5 ukuya endaweni yesikebhe ngokuhamba ngezinyawo. Kuseduze nesiteshi sikamasipala sase-Uskudar(imizuzu emi-4 ngokuhamba), isiteshi samatekisi singaphandle komnyango. I-Seaside inepaki, amakhilomitha ohambo lolwandle nendlela yamabhayisikili, izindawo zokudlela zezinhlanzi, amabha kanye nemakethe.
Umnikazi uzokujabulela ukwamukela izivakashi mathupha e-Mansion futhi akunikeze ngohambo lomuntu siqu lwalesi sakhiwo esikhethekile. Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nami nganoma imiphi imibuzo noma izinkathazo ngomlayezo kwa-Airbnb